यस्ताे छ सरल तरिकावाट खाना पचाउने चार हिन्दु पद्धती – Kavreonline
यस्ताे छ सरल तरिकावाट खाना पचाउने चार हिन्दु पद्धती
By kavreonline	 On Jun 14, 2019
खासमा खानाले शरीरलाई निरोगी, तन्दुरस्त राख्नुपर्ने हो । तर, अहिले हाम्रो खानपान रोगको कारण बनिरहेको छ । खाना विषाक्त बनिरहेको छ । खानाकै कारण स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आउने गरेको छ । कब्जियत, अपच त सामान्य जस्तै भइसक्यो ।
खानाको सोझो नाता हाम्रो स्वास्थ्यसँग छ । जबकी त्यही खानाले हामी अस्वस्थ्य हुन्छौं । त्यही कारण अहिले हामी खाना खान पनि डराउँछौ । पेट लाग्ने हो कि, मोटोपन पो बढ्ने हो कि, मधुमेह हुने हो कि ? खाना खाइरहँदा पनि मनमा सन्तोष छैन । सुख छैन ।
हुन त समय नै त्यस्तो छ । हामी आफै अन्न उब्जनी गरेर खान समर्थ छैनौ । अरुले खेतीपाती गरेर, अरुले नै बजारसम्म ल्याएका खानेकुरा खरिद गरेर हाम्रो भान्सामा आइपुग्छ । यस्तो खानेकुरा स्वस्थ्यबर्द्धक हुन्छ भन्ने छैन । त्यसमाथि हामीलाई आफ्नै हातले पकाउने फुर्सद पनि छैन । अरुले पकाएको खान्छौ । रेष्टुरेन्टकै खानामा पनि भर पर्छौ । एकातिर खानपान शैली यस्तो छ, अर्कोतिर सुविधाभोगी जीवन । हामीलाई ऐशआरम चाहिएको छ । बसीबसी खान बानी परेको छ । यस्तो अवस्थमा हाम्रो पाचन यन्त्रले अतिरिक्त बोझ उठाउनुपर्छ ।
शरीरको निर्माण नै समूचित श्रम गर्नका लागि हो । तर, हामी न व्यायाम गर्छौ, न शारीरिक श्रम । जबकी खानेकुरामा चाहि लोभी छौ । स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि जिब्रोको लागि खान्छौ । यसको सोझो असर हाम्रो पाचन यन्त्रमा पर्छ । त्यही कारण त हामीलाई पेटको रोगले सताएको छ ।
जबमी हामीले खाएको खानेकुरा सुपाच्य हुनुपर्छ । सजिलै पचाउन सकिने । यस्तो खानेकुराले पाचन यन्त्रलाई चुस्त र बलियो बनाउँछ । शरीरलाई पोषण प्रदान गर्छ ।
कसरी भोजन सुपाच्य बनाउने ?
उत्तम भोजन चयन गरौ । भोजन गर्ने समय र नियम बनाऔ । भोजन यस्तो गरौ, जो आफ्नो शरीरका लागि होस् । साथै समयमै पच्न सकोस् । पेट मात्र भर्नका लागि केहीपनि मुखबाट प्रवेश नगराऔ । शरीर कुनै डस्बिन होइन ।
यदि तपाईं चुरोट, रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ भने यो आलेख तपाईंको लागि होइन ।
राम्ररी खाना चपाउनुहोस्
हामीमध्ये धेरैले खाना हतार-हतारमै खाने गर्छौ । खानालाई राम्ररी चपाउने गर्दैनौ । यदि दाँतले राम्ररी चपाएर खाने हो भने आन्द्राले धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन । अर्थात आन्द्रालाई खाना पचाउन सजिलो हुन्छ । हिन्दु शास्त्र, आयुर्वेद र योगमा लेखिएको छ कि एक गाँस खानालाई कम्तीमा ३२ पटक चपाउनुपर्छ । दाँत ३२ वटा हुन्छ । हामीले एक गाँस खाना पनि कम्तीमा ३२ पटक चपाउनुपर्छ । यसरी खाना चपाएपछि त्यो पाचन रससँग राम्ररी घुल्छ । हिन्दु शास्त्र अनुसार खाना खाने विधी पनि छ । पहिला गुलियो, त्यसपछि नुनिलो अन्त्यमा टर्रो ।
सबैभन्दा पहिला रसदार, त्यसपछि गरिष्ठ र अन्त्यमा द्रव्य पदार्थ ग्रहण गर्ने । थोरै खाना खाँदा आरोग्य, आयु, बल, सुख र सुन्दरता मिल्छ ।
उचित मात्रामा पानी पिउने
भोजनको एक घण्टाअघि पानी पिउनुपर्छ । फेरी खाना खाएको एक घण्टापछि पानी पिउनुपर्छ । यसबीचमा पानी पिउनु हुँदैन । अर्थात खाना तुरुन्तै पानी पिउनु हुँदैन । पानीले भोजनलाई पचाउन सहयोग गर्छ । तर, पानीको मात्रा धेरै भयो भने भोजन सड्छ । त्यसैले उचित मात्रामा, उचित समयमा पानी पिउनुपर्छ । उचित अर्थात सम्यक ।
पानीको काम भोजन पचाउनु हो । यदि तपाईंले कम पानी पिउनुभयो भने उचित भएन । धेरै पानी पिउनुभयो भने पनि उचित भएन । तपाईंलाई जब प्यास लाग्छ, तब पानी पिउनुहोस् । त्यती नै पिउनुहोस्, जति प्यास लागेको छ ।
प्राणयाम गरौ एवं उचित ढंगले श्वास लिने गरौं
जसरी पानीले भोजन पचाउने र तौल घटाउने काम गर्छ । त्यसैगरी वायुको काम भोजनलाई पचाएर बाहिर निकाल्ने हो । यदि तपाईं उचित ढंगले श्वास लिने र छाड्ने क्रिया गर्नुहुन्छ भने भोजन पचाउन सहज हुन्छ । यसका लागि प्राणायाम पनि उचित विधी हो । अनुलोम विलोम गर्दा पनि भोजन राम्ररी पच्छ ।
आफुले श्वास फेरिरहँदा त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरौं । श्वास प्रश्वास क्रिया उचित छ कि छैन भनेर ध्यान राखौं । कहिले काही क्रोध, चिन्ता वा खराब बिचारले पनि हाम्रो श्वासको गति बद्लिन्छ । यसले पाचन क्रियामा समस्या ल्याउँछ ।
अचम्मकाे गाउँ, जुन वर्षमा एक महिना मात्रै पानी बाहिर हुन्छ
अघोर बाबालाई बलात्कारी,चोरी,जड्या देखि अन्य भयानक आरोप लागेपछि छिमेकीहरु बाबाकै…
आफूलाई दैवि शक्ति प्राप्त भएको भन्दै वृद्ध महिलालाई चक्कु देखाउने माता पक्राउ
मनकारी ट्याक्सी चालक: जसले वृद्धवृद्धा, दृष्टिविहीन र दुखीलाई नि:शुल्क यात्रा…